नयाँ विधेयक प्रति किन असन्तुष्टी जनाउदै छन् त, अभिकर्ता र सर्भेयर ? – Insurance Khabar
नयाँ विधेयक प्रति किन असन्तुष्टी जनाउदै छन् त, अभिकर्ता र सर्भेयर ?
प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७५, आईतवार १४:१५
केही दिन अगाडी बीमा विधेयकको विषयलाई लिएर बीमा अभिकर्ता र बीमा सर्भेयरहरुको माग कतै नयाँ विधेयकमा आफूहरुको माग सम्बोधन नगरीएको हो की भन्ने विषयमा छलफल गरी विधेयक संसोधन गर्न माग गरीएको थियो ।
हालका दिनमा उक्त विषयलाई लिएर व्यापक बहस पनि भईरहेको छ । अभिकर्ताको हकमा नयाँ विधेयकमा ल्याउन लागिएको विषय प्रती अभिकर्ताहरु रुष्ट देखीन्थ्यो किनभने अर्थमन्त्रालयले बीमा विद्येयक संसदमा प्रस्तुत गरे पश्चात विद्येयकमा एउटा अभिकर्ताले एउटा कम्पनीमा मात्रै काम गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ । हाल एउटा अभिकर्ताले सबै कम्पनीमा काम गर्न पाउँने व्यवस्था छ । तर, नयाँ बिद्येयकमा भने एउटा कम्पनीले एउटा कम्पनीमा मात्र काम गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी एउटा अभिकर्ताले एउटा जीवन र अर्को निर्जीवन बीमा कम्पनीको अभिकर्ता भएर भने काम गर्न पाउँने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष- पेशागत अभिकर्ता संघ नेपाल
संसदमा जुन किसिमको विधेयक प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा गरिएका व्यवस्थाले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । विद्येयकमा एउटा अभिकर्ताले एउटा बीमा कम्पनीमा मात्र काम गर्न पाउँने भन्ने छ, जुन गलत छ । हामीले जुनसुकै कम्पनीमा पनी काम गर्न पाउनु पर्दछ । एउटा विमामा मात्र रहेर काम गर्न व्यवस्थाले हामीलाई मात्र हैन कम्पनी र बिमीतलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ ।
अभिकर्ता बीमा कम्पनीको मेरुदण्ड हो । अभिकर्ताको पेशामा लागेर बर्षौ गुजार्ने पनि कति अभिकर्ता छन् । तर, कहिल्यै पनि अभिकर्ता कम्पनीको संचालक बन्न सक्दैन । अर्थात् अभिकर्तासँग बीमा सम्बन्धी जति अनुभव भए पनि नीति निर्माणको तहमा अभिकर्तालाई कहिल्यै राखिदैन । यो भनेको अभिकर्ता प्रतिको विभेद हो ।
अभिकर्तालाई मर्यादित बनाउनु अघि राज्यले नै यस पेशालाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । किनभने अभिकर्ता भनेको बीमा क्षेत्रको लागि एक मेरुदण्ड पनी हो । उसले बीमितलाई पनी कम्पनीको पोलिसीको बारेमा जानकारी दिन्छ । यसलाई जुन किसिमको दृष्टिकोणले हेरेको छ । त्यसलाई पक्कै पनी परिर्वतन गर्न जरुरी छ । जसरी डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स आदिकोे पेशा हुन्छ । यसलाई पनी त्यही रुपमा मान्यता दिनुपर्छ । त्यती मात्र नभएर अभिकर्ताले सरकारलाई १५ प्रतिशत कर पनि तिरेको हुन्छ । त्यसैले अब, यस पेशालाई मर्यादित बनाउन राज्य स्तरबाट नै यस पेशा प्रति हेर्ने दृष्टिकोणलाई सकरात्मक बनाउनु पर्छ ।
यसै गरी सर्भेयरको हकमा भने सर्भेयरहरुको जरिवाना घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विद्येयकमा बीमा सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको समयमा आवश्यक जानकारी वा कागजपत्र नबुझाएमा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटा सर्भेयरले सबै खालको सर्भे गर्न पाउँने माग नयाँ विद्येयकमा एउटा सर्भेयरले एउटै खालको बीमा सर्भे गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सर्भेयरले भने एउटा मात्रै बीमाको सर्भेयर गर्दा जीवीकोपार्जनमा कठिन हुने र नेपालमा जनशक्तिको अभावको कारण बीमा क्षेत्रमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने तर्क राख्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष-एमआई सर्भेयर ग्रुप
नयाँ बीमा विधेयकमा सर्भेयरको विषयमा धेरै नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस बिषयमा तपाईको धारणा के छ ?
बीमा विद्येयकमा सर्भेयरको बिषयमा गरिएको व्यवस्था राम्रो छ । खासै सर्भेयरहरु निराश भै हाल्नु पर्ने अवस्था छैन । तर, नेपालमा सर्भेयरलाई अझै जिम्मेवार बनाईनुपर्छ । सरकारले बनाउने नीति नियम पनि सर्भेयरलाई जिम्मेवार बनाउने खालको आउनु पर्यो । सर्भेयरलाई बढी व्यवसायिक बनाउने हो भने संस्थागत रुपमा सर्भेयरले काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कुनै पनि सर्भेयरले एक प्रकारको मात्रै बीमाको सर्भे गर्नु पर्यो भने उसमा त्यस बिषयको दख्खल बढ्दै जान्छ । अर्को कुरा एउटा सर्भेयरलाई सबै बिषयमा ज्ञान पनि हुँदैन । उसले जुन बिषयमा योग्यता हासिल गरेको छ । त्यही बिषयमा मात्र ज्ञान हुन्छ । त्यसैले सर्भेयरलाई त्यहि बिषयको मात्रै बीमा गर्ने प्रावधान गराउनु एकदमै ठिक छ ।